Ogaden News Agency (ONA) – Barqa-maal oo ka tirsan Sagag ayaa khasaare laxaadleh loogu gaystay ciidamada gumaysiga
Barqa-maal oo ka tirsan Sagag ayaa khasaare laxaadleh loogu gaystay ciidamada gumaysiga
Posted by ONA Admin	/ March 25, 2013
Wararka nagasoo gaadhay Xarunta dhexe ee JWXO waxay sheegayaan dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan Sagag kuwaasi oo xukuumada gumaysiga Itobiya lagaga laayey tiro kamid ah ciidamadeeda mooraalka jabsan ee dulmiga ku jooga dalka Ogaadeeniya. Dagaaladaa maalinjooga ah ayaa waxaa ka mid ahaa;
09/03/2013 Kamiin ay ka xidheen NH/CWXO deegaanka lagu magacaabo Barqa-maal oo Sagag katirsan ayaa waxaa soo galay kolonyo gaadiidka gumaysiga Itobiya waxaana kalkaasi lagu gubay hal Baabuur iyo askartii saarnayd oo ay san waxba kabixin.
Sidoo kale gaadiidkii lasocday kan la gubay ayaa rasaas xoogan oo lagu furay waxay sababtay dhimashada 19 kamid ah ciidmadii saarnaa gawaadhidaas halka dhaawacuna uu yahay 20 kale.
05/03/2013 Weerar lagu qaaday Maxaysato lagu soo uruuriyay Cali-fancad oo Sagag udhow ayaa waxaa lagaga dily 8 Askari waxaana lagaga dhaawacay 5 kale iyadoo ay cagaha wax ka dayeen dabaqoodhigii kale halkaasna ay isaga carareen.
03/03/2013 sangaal oo Sagag u dhow dagaal ka dhacay waxaa lagu dilay 1 Askari waxaana lagu dhaawacay 3 kale.
28/02/2013 Sagag weerar mir ah oo lagu qaaday fadhiisin ay askarta gumaysigu ka daganaayeeyn magaalada Sagag ayaa waxaa weerarkaa mirta ah lagaga dilay 3 Askari waxaana lagaga dhaawacay 4 kale.